Ukuzinikela kokuziphatha - I-World March
Ikhaya » Ukuzibophezela kokuziphatha
Umuntu wesayensi nososayensi uSalvatore Puledda wenza i-7 kaJanuwari ka-1989 eFlorence, inhloko-dolobha yombuso wobuntu, inkokhelo kuGalileo Galilei, uGiordano Bruno kanye nabanye ababikezeli besayensi namhlanje. Ngaleso sikhathi, ukuzinikela kwenziwa phakathi kwabafundi, ukulwa ngokuzimisela ukuze kusengaphambili isayensi ibekwe enkonzweni yomuntu.
Kusukela kulowo mcimbi kwavela isinyathelo eMhlabeni ngaphandle Kwezimpi sokwenza isenzo esaveza futhi sachaza lokho kuzibophezela kwabathintekayo. "Ukuzibophezela Kokuziphatha" kwenziwa futhi kwaqhutshelwa isenzo e-University of Distance Education eMadrid lapho osolwazi, osolwazi kanye nabafundi bekwenza ngezilimi eziyi-10.
Sisezweni lapho abanye bazimisele ukuthengisa ulwazi lwabo nolwazi nganoma iyiphi injongo nganoma iyiphi intengo. Lezi zihlanganisa iplanethi yethu ngemishini yokufa. Abanye baye basebenzisa ubuhlakani babo ukwakha izindlela ezintsha zokusebenzisa, ukuthula, ukuphazamisa unembeza wabantu nabantu.
Kukhona amadoda nabesifazane abaye basebenzisa iSayensi neLwazi ukukhulula ukukhathala nokulamba, ubuhlungu nokuhlupheka kobuntu, ukuphulukisa umlomo emiphakathini yabanxuswe, ukuwanika izwi nokubenza baqiniseke.
Namuhla, ekuqaleni kweminyaka eyizinkulungwane yesithathu yeNtshonalanga, ukusinda kwazo zonke izinhlobo zezilwane kusongelwa futhi emhlabeni, ikhaya lethu elivamile, kubhekene nenhlekelele yengozi yemvelo kanye ne-hecatomb nuclear.
Ngakho-ke sicela kusukela lapha bonke ososayensi, abacwaningi, ochwepheshe nabafundisi bezwe ukusebenzisa ulwazi lwabo ngenzuzo ekhethekile yoBuntu.
Ngiyathembisa (ngifunge) kubangani bami, othisha, umndeni nabalingani bami abangalokothi basebenzise empilweni yami ulwazi olutholiwe nokufunda esikhathini esizayo ukucindezela abantu, kodwa ngokuphambene nokufaka isicelo sokukhululwa kwabo.
Ngizibophezela ukuba ngisebenzele ukuqeda ubuhlungu bomzimba nokuhlupheka kwengqondo.
Ngizibophezele ekukhuthazeni inkululeko yokucabanga nokufunda emisebenzini yokungabi nodlame ngokufuna "ukuphatha abanye ngendlela engingathanda ukuphathwa ngayo."
Ulwazi oluhle luholela enkantolo
Ulwazi oluhle luvimbela ukulwa
Ulwazi oluhle luholela ekukhulumeni nasekuxoxweni
Sibiza kusukela lapha kuwo wonke amanyuvesi, izikhungo zocwaningo, izikole eziphakeme, amakholeji ukufaka lokhu ukuzibophezela kokuziphatha, okufana nalokho uHippocrates adalwe odokotela, ukuze kufezwe lelo lwazi lisetshenziselwa ukunqoba ubuhlungu nokuhlupheka , ukuhlenga umhlaba.